अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र नर्वेका विकास मन्त्रीबीच भेट
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १८ कात्तिक
अर्थमन्त्री डा. युवराव खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री ड्याग इ उल्स्तेनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको शिष्ट्राचार भेटमा नर्भेजियन बिकास मन्त्रीले नेपालले सहस्राब्धी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा सफलता प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
मन्त्री उल्स्तेनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । प्रत्येक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) परिचालन गर्नको लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा भने उनले चासो व्यक्त गरेका अर्थमन्त्रालयले जानकारी दियो ।
नर्वेजियत मन्त्रीले नेपालको कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए । उनले संघीय तथा स्थानीय सुशासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) संचालन गर्नको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा निकै खुशी लागेका धारणा व्यक्त गरे ।
भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको वताए । एफडीआई परिचालनमा दोस्रोचरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षण्देखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भईरहेको बताए ।
मन्त्री खतिवडाले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे ।
एसियाली विकास बैंक र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि समझदारी पत्रमा सम्झौता भयो । अब, एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने समझदारी भएको हो । यसमध्ये नर्वेजियन सरकारको २० लाख अमेरिकी डलर छ । समझदारी पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरे ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६, १८:३९:००